सुविधा रोजेका शिक्षक नै परीक्षा सार्न आमरण अनसनमा ! | Educationpati.com
२०७४ भदौ ४ गते ०३:०७मा प्रकाशित
काठमाडौं ।सुविधा रोजेका अस्थायी शिक्षक परीक्षा सार्न आमरण अनसन बसेको खुलासा भएको छ । आफुले सुविधा रोज्ने साथै, अन्य अस्थायी शिक्षकहरुका लागि हुन लागेको परीक्षा सार्न अनसन पनि बस्ने दोहोरो चरित्र पाइएको हो ।
भाद्र ३ गतेको परीक्षा सार्ने मुख्य मागसहित यसअघिको चारबुंदे सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेर राजधानीको भद्रकालीमा चण्डीदेवी प्रावि ललितपुरका शिक्षक विष्णुहरि दुनुवार र महावीर शाह मावि पर्साका अस्थायी शिक्षक किनुसप्रसाद यादव अनसनमा बस्दै आएका छन् ।
सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुसँग यसअघि भएका चारबुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिसकेको छ भने शिक्षक सेवा आयोगले पनि भाद्र ३ गतेको परीक्षा सारेर भाद्र १० मा पु¥याएको छ । तर, अस्थायी शिक्षकहरुले दुवै माग पुरा भएपनि आमरण अनशन लगायतका आन्दोलन छाडेका छैनन् । उनीहरुले अनिश्चितकालिन रुपमा परीक्षा नसरेसम्म आमरण अनशन नतोडिने स्पष्ट पारेका छन् ।
तर, यसै परिप्रेक्षमा अन्य अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी हुन खुलेको परीक्षा सार्न आमरण अनसन बसेका अस्थायी शिक्षक स्वयं आफूभने सुविधा रोजेका पाइएको छ । अनसन बसेका मध्ये ललितपुर ढुकुछापस्थित चण्डी देवी प्राथमिक विद्यालयमा गणित विषय अध्यापन गराइरहेका ४५ वर्षे विष्णुहरि दुनुवार आफुले भने परीक्षा नभइ सुविधा रोजेका छन् ।
२२ वर्षदेखि शिक्षक सेवामा संलग्न उनले परीक्षामा ४० नम्बर ल्याउन असफल हुने भन्दै सुविधा रोजेका छन् । तर, आफु भने सुविधा रोजेको भएपनि अन्य हजारौं अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी बनाउन खुलेको विज्ञापनलाई सार्न भन्दै उनी आमरण अनसनमा बसिरहेका छन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले सार्वजनिक गरेको परीक्षार्थीको अन्तिम नामावलीमा ललितपुर जिल्लाबाट प्राथमिक तहमा परीक्षा दिने लिष्टमा दनुवारको नाम छैन । तर, अर्का अनसनकारी किसुन प्रसाद यादवले भने पर्सा जिल्लाबाट प्राथमिक तहको परीक्षा दिने भन्दै परीक्षाको फारम भरेका पाइउको छ । उनले मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको पर्सा जिल्लामा प्राथमिक तहको विज्ञापन नम्बर १०२ मा फारम भरेका छन् । उनको रोल नम्बर ३७१२०००१ रहेको छ ।
संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष केन्द्रिय समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले गत साउन १८ गतेदेखि आयोगको परीक्षा सार्न भन्दै आमरण अनसन बसेका शिक्षकले सुविधा रोजेका स्पष्ट पारे । 'उहाँहरु आफुले सुविधा रोजेपनि हजारौं परीक्षा रोजेका अस्थायी शिक्षकहरुको न्यायका लागि आमरण अनशन बस्नु भएको छ ।' अधिकारीले भने ।
शिक्षक महासंघ भन्छ आमरण अनसन नै छैन
शिक्षक महासंघले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएदेखि नै अस्थायी शिक्षकहरुको आमरण अनसन टुंगिएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले अस्थायी शिक्षकहरुको आमरण अनसन बारे आफुलाई जानकारी नभएको बताए । 'परीक्षा सर्ने र संसदमा ऐन संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुनेबित्तिकै आमरण अनशन टुंगिसक्यो ।' निरौलाले भने । हाल भद्रकालीमा कोही पनि आमरण अनसनमा नभएका र उनीहरु हस्पिटलमा भर्ना भइसकेका उनले जिकिर गरे । 'मर्छु भनेर आमरण अनसन बसेका शिक्षकहरु बाच्नका लागि हस्पिटल जाने, दवाइर भिटामिन खाने गरेपछि आमरण अनसन भइरहन्छ र ?' निरौलाले प्रश्न गरे ।
अनसनरत विष्णुहरि दनुवार लामो समय देखि बानेश्वरको एभरेष्ट हस्पिटलमा उपचाररत् छन् । अर्का अनसनरत अस्थायी शिक्षक किशुनप्रसाद यादव पनि हस्पिटलमा भर्ना हुन खोजेपनि उनलाई अस्थायी शिक्षकहरुले भर्ना गर्न चाहेका छैनन् । उनीपनि हस्पिटलमा भर्ना भए अनसनस्थलमा अनसनकारी नै नहुने भएकाले उनलाई अस्थायी शिक्षकहरुले हस्पिटलमा भर्ना नगरेका हुन् । पर्सा घर भएका यादवको बाढी पसेर घरमा समस्या आएको छ । दिनदिनै श्रीमतिले अनसन छाडेर घरमा आउन आग्रह गर्ने गर्छिन तर अस्थायी शिक्षकहरुले भने दुवै अनसनकारीहरुको नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकमा ११३००५१३३७१० नम्बरको संयुक्त खाता खोलेर रकम जम्मा गरिदिँदै अनसनलाई लम्वाइ रहेका छन् । संयुक्त अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र अधिकारीले उनीहरुको उपचारमा सहयोग होस् भनेर दुवै जनाको नाममा संयुक्त खाता खोलिदिएर रकम जम्मा गरिदिँदै आएको बताए । 'आर्थिक प्रलोभन दिएको होइन उपचारमा सहयोग होस् भनेर हो-' उनले भने । अनसनस्थलमा दैनिक आउने अस्थायी शिक्षकहरुलाई उनीहरुको खता नम्बर दिएर रकम जम्मा गरिदिन आग्रह गरिँदै आइएको छ । भने जिल्ला समितिहरुसँग समेत आग्रह गरिँदै आइएको छ ।
हेर्नुहोस ललितपुर जिल्लाबाट प्राथमिक तहमा परीक्षा दिने शिक्षकहरुको नामावलीमा विष्णु दनुवारको नाम छैन ।
पर्साका किशुनप्रसाद यादवको नाम भने छ ।